Rainforest Alliance/Usaid : kaoperativa lavanila dimy nankatoavina | NewsMada
Rainforest Alliance/Usaid : kaoperativa lavanila dimy nankatoavina
Par Taratra sur 08/07/2020
Andro Iraisam-pirenena ho an’ny Koperativa, ny 6 jolay. Anisan’ny nanamarihan’ny Sampandraharaha Amerikana Misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (Usaid) azy ny fampahafantarana fa nahazo ny fankatovana Rainforest Alliance ny kaoperativa lavanila malagasy miisa dimy, ahitana tantsaha miisa 1.791. Tanteraka izany, vokatry ny asa tsara vitan’izy ireo noho ny fanohanan’ny Usaid Mikajy amin’ny fampihenana ny fiantraikany ratsy ny famokarana lavanila amin’ny tontolo iainana, niarahana tamin’ny mpiara-miombon’antoka tsy miankina, any avaratra atsinanan’i Madagasikara. Manatsara ny fidiram-bola sy ny fari-piainan’izy ireo izany.
Vidin’ny lavanila mahafa-po
Manome ny fankatoavana ekena iraisam-pirenena ireo mpamokatra sakafo manaraka ny fenitra lovainjafy ny Rainforest Alliance. Anisan’ny tombontsoa ny hahazoan’ny kaoperativa malagasy vidiny mahafa-po ho an’ny lavanila tsara kalitao. Nahazo fiofanana izy ireo amin’ny fandrindrana ny asa sady nahazo fitsaboana tsara kokoa. Nandritra ny herintaona ny fiaraha-miasan’ny Usaid Mikajy sy ireo kaoperativa ary notombanan’ny Rainforest ny zava-bita.
Anisan’ny fenitra ahazoana fankatoavana ny fikajiana ny hamaroan’ny rohinaina, ny fanatsarana ny fivelomana sy ny fiadanan-tsaina, ny fitantanana ny harena voajanahary ary ny drafitra mahomby amin’ny fitantanana ny asa fambolena. Eo koa ny tsy fampiasana zaza tsy ampy taona, tsy mampanao asa an-tery ny mpamokatra, tsy mampiasa akora simika ary ny fisian’ny toeram-pidiovana any amin’ny faritra iasana.
Mitohy ny fiaraha-miasa
Manampy ara-teknika amin’ny fanaraha-maso sy ny fa­nan­gonam-bokatra ny Usaid Mikajy. Nampiana ny vehivavy sy ny vadin’ny mpikambana amin’ny fananganana tahirim-bola sy fampindramam-bola (VSLA). Nampiofanina ny vehivavy amin’ny fitantanam-bola sy ny fanaovana ka­on­tim-bola.
Mitohy ny fiaraha-miasan’ny Usaid Mikajy sy ny kaoperativa asa na eo aza ny fankatoavana. Mila mampiseho isan-taona ny kaoperativa fa ma­natsara mitohy izany fankatoavana izany. Asehon’ny Usaid Mikajy amin’ny alalan’ny tetikasa Conservation & Com­munity Projest (CCP) an’ny Usaid ny lanjan’ny fanomezan’andraikitra sy ny fahafahan’ny vondrona olona ifotony (VOI) mitari-dalana. Mano­hana ny VOI any andrefana sy avaratra atsinanan’i Madagasi­kara ny Usaid Mikajy amin’ny fitan­tanana lovainjafy.
«Sekoly Telma»: construction de 5 établissements préscolaires 18/06/2021